Wax walba oo ku saabsan Superdrol (Methasterone)
1. Waa maxay Superdrol (Methasterone)? 2. Qiyaasta Superdrol
3. Wareegga Superdrol 4. Natiijooyinka Superdrol
5. Superdrol qaybta nuska ah 6. Superdrol u goynta
7. Superdrol loogu talagalay duufaanta 8. Gunnooyinka Superdrol
9. Dib u eegista Superdrol 10. Superdrol iibka
11. Superdrol loogu talagalay jirka dhismaha (kooban)
1. Waa maxay Superdrol (Methasterone)? Sidee u shaqeysaa?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay Superdrol (Methasterone) laga bilaabo cayaaraha, jirka ama qof kasta oo jecel inuu muuqdo muuqaal qurux badan. Haddii aad la yaabtay Superdrol (3381-88-2), akhri maqaalkan si aad u fahanto, waxaadna fahmi doontaa wareegga Superdrol, qiyaasta Superdrol, faa'iidooyinka Superdrol iyo wax kasta oo keenaya steroidkan jilicsan.
Waa hagaag, Superdrol (3381-88-2) oo loo yaqaan 'Superdrol' ama 'drostanolone' meth methyl waa mid ka mid ah ereyada ugu awooda badan ee firfircoon ee 'anabolic androgenic steroid' (AAS) kuwaas oo ku dhajiya jidhka. Waxaa lagu hormariyay 1950s laakiin aan loo sii deyn suuqa sida daroogada dhakhtar qoray.
Inkasta oo Methasteron lafteeda ay udub dhexaad u tahay steroids, sheyga non-17a-alkylated ee Methasteron wuxuu ku jiray suuqa oo hoos magaciisa Masteron. Muddo gaaban, waxaa jiray cunto dheellitiran oo lagu magacaabo Superdrol sababtoo ah waxay ku jirtay Methasteron.
2006 waxaa joojiyay FDA iyo 2012. Methasteron si buuxda ayaa loo mamnuucay halkan, taas oo ku dartay liiska maadooyinka la xakameeyey sida dhammaan noocyada kale ee Anabolic Androgenic steroids.
Taasi ma aysan ka dhicin Methasteron meel ka muuqata muuqaalka jidhka. Had iyo jeer waxa ay qaadatay meel sare oo ah mid ka mid ah steroids afka ugu xoogan.
Superdrol (3381-88-2) waxay si la mid ah u shaqeeyaa steroids anabolic androgenic. Farqiga keliya ayaa ah in isugeyntu ay ka duwan tahay waxayna bixisaa natiijooyin degdeg ah oo aad u ballaaran.
Waxay ka kooban tahay hormoon firfircoon ee steroids oo loo yaqaan methyldrostanolone. Waa dihydrototestosterone (DHT) taas oo ah isbeddelka drostanolone. Farqiga u dhexeeya drostanolone iyo Superdrol waa in drostanolone ay leedahay koox methyl ah oo dheeraad ah oo lagu meeleeyo booska Carabta toddobaad. Kooxdani waxa ay ka dhigaysaa suurtogalnimada Superdrol in la qaato hadal ahaan iyo sidoo kale inay awoodaan inay boodaan beerkaaga.
Superdrol wuxuu leeyahay koox kale oo methyl ah oo laga helo booska labaad ee Carbon oo ka dhigaya stomoid anabolic. Isbeddel yar oo ka yimaada drostanolone ayaa ka masuul ah saamaynta iyo istrogenka yar ee Superdrol marka la barbardhigo steroids kale. Hagaha Guud ee Dianabol ee Jidh-dhiska
Superdrol waxay u shaqeysaa iyadoo la dhiirigelinayo xajinta nitrogen iyo kiniiniyada borotiinka. Faa'iidada ay la socoto waa marka marka borotiin badan la soo saaro, iyo nitrogen sii haysay unugyada muruqyada oo badan ayaa la dhisaa. Si deg-deg ah ayey u socotaa qiyaasta wax-qabadka iyo sii-haynta, sida ugu dhakhsaha badan ayaad u socotaa.
Isticmaalka Superdrol ayaa sidoo kale keena oksijiin ka yimaada unugyada muruqyada. Markaad tababbarto, microfibers-kaaga ayaa dillaacaya, korriinka murqaha wuxuu yimaadaa iyadoo ay sabab u tahay dayactirka. Oksiisiin badan ayaa macnaheedu yahay inay si dhakhso ah u soo kabtaan, sidaas awgeed, waad tababbari kartaa tani sii kordheysa xajmiga muruqyadaada.
2. Qiyaasta Superdrol
Marka aan ka hadleyno Qiyaasta Superdrol, waa in aan maskaxda ku heynaa in yoolalka jidhku ka duwan yahay qof ka qof. Iyadoo qofku rabi karo in uu kiciyo, ujeedada kale waa laga gooyaa. Dhammaanba dhammaan qiyaasta Superdrol ee 20-30mg qiyaastii afar illaa lix toddobaad ayaa ku filan inay ku siiyaan natiijooyinka ujeedadaada iyada oo aanad khatar gelin caafimaadkaaga.
Inta badan Superdrol Isticmaalayaasha waxay yiraahdaan kahor intaadan dooran qiyaasta Superdrol, waa inaad haysataa dheelitirka saxda ah ee muruqyada muruqyada iyo dhibaatooyinka soo raaca. Waxaad tagi kartaa ilaa 40mg haddii aad rabto. Qaadashadan, waxaad ku guuleysan doontaa muruqyo badan iyo guulo xoog leh adigoon iloobin saamaynta saamiga Superdrol. Uma qalanto.
Haddii aad doorato inaad qaadato 40mg, waa inaadan isticmaalin wax ka badan afar toddobaad. Muddadan ka dib, beerkaagu aad ayuu u shaqeyn doonaa haddii aadan fasax qaadan, waxaa laga yaabaa in aad ku xannibto dhibaatooyinka beerka. Afarta toddobaad kadib, beerkaaga ayaa u baahan doona inuu soo kabsado si uu u awoodo inuu u shaqeeyo si caadi ah.
Haddii ay dhacdo in aad Superdrol keli keli kari waydo, waxaad kala qaybin kartaa qiyaasta yar yar waxayna qaadataa maalinta oo dhan. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa hal subax, mid kale ka hor inta aanad shaqeynin iyo qiyaasta ugu dambeysa ayaa la qaadan karaa fiidkii. Markaad sidan sameyso, waxaad la kulantaa dhibaatooyin yar yar sababtoo ah qaadashada Superdrol waxay keeni kartaa isbeddel hoormoonadaada.
3. Wareegga Superdrol
Caadi ahaan, wareegga Superdrol wuxuu qaadanayaa qiyaastii lix illaa siddeed toddobaad. Sida bilowga ah, waxaad ku bilaabi kartaa qiyaasta Superdrol ee 10mg maalin kasta si aad u tijaabiso dareenka. Marka aad aragto sida jidhkaagu uga soo horjeedo, waxaad markaa kordhin kartaa qiyaasta si tartiib tartiib ah. Qiyaasta Superdrol ee 20mg waxay noqon kartaa tan xigta ee aad qaadato. Markaad dareentay inaad leedahay khibrad ku filan, waxaad bilaabi kartaa inaad qaadato 30mg maalintii.
Kuwa jecel inay xareeyaan Superdrol (3381-88-2) oo leh steroids kale oo antrolic ah sida Testosterone, inta lagu jiro jimicsiga hore waa waqtiga ugu fiican. 10mg waa ku filan inay ku siiso faa'iidooyinka ugu badan ee Superdrol.
Ka dib markaad wareegsanayso wareegga Superdrol, waa inaad mareysaa daaweynta wareega dambe. Waxaad sameyn kartaa PCT-da shanaad illaa siddeedda toddobaad. Waxay kaa caawineysaa dib u helidda caafimaadkaaga iyo sidoo kale sida caadiga ah heerka hormoonkaaga. Sidoo kale, waxaad ka fogaan kartaa waxyeelo xun oo keeni karta sababo la'aanta dheecaannada hormoonnada.
4. Natiijooyinka Superdrol
Superdrol (3381-88-2) ayaa ku guuleystay wadnaha dad badan sababtoo ah saameynta ay bixiso. Haddii aad u socoto wareegga Superdrol illaa afar illaa lix usbuuc, waxaad u maleyneysaa inaad ku dhowdahay 10 rodol oo muruq ah. Isku dar ah AAS kale, waxaad ogaan doontaa natiijooyinka ugu fiican.
Natiijooyinka 3-toddobaadkii oo la qaato 20mg Superdrol 1 / 3 / 2019 27 / 3 / 2019
Miisaanka 95.3 kg 100kg
dhexda 104 cm 104.5 cm
Kubir (R) 38cm 40cm
Rugta (R) 65 cm 67 cm
Laab 115cm 116cm
garbaha 133 cm 135 cm
Sida muuqata miiska, natiijooyinka ayaa ah kuwo cabsigelinaya ka dib markii ay socdaan wareegga Superdrol saddex toddobaad kaliya. Qiyaas dhexdhexaad ah oo 20mg ah ayaa la isticmaalay. Laga soo bilaabo xogta la heli karo, waxaad ogtahay in Superdrol qulqulka saamayntu way ka fiican tahay inta badan.
Taasina waxay kor u qaadeysaa awoodda si wayn. Inaad karti u yeelatid 50lbs badan oo ku saabsan miisaankii aad tababartay ma aha wax aan iska indhatirayn karno. Marka dadku ka hadlaan waxtarrada Superdrol, ma maqnaan doontid dhageysiga ku saabsan guulaha iyo korodhka culeyska. Marka lagu daro tababbarka iyo cuntada saxda ah, marnaba ma dhibi doontid si aad uhesho ujeedooyinka jidhkaaga.
5. Superdrol qaybta nuska ah
Cabbirka badhkiis ee Superdrol wuxuu u dhexeeyaa sideed ilaa sagaal saacadood. Sidaas daraadeed, waxay ka baxaysaa nidaamka mid aad u degdegsan waana taas sababta ay u baahan tahay qiyaasta soo noqnoqota. Markaad sidan sameysid, waxaad ku sii wadi kartaa heer nafaqada xasaasiga ah ee jirka.
6. Superdrol u goynta
Superdrol waxay ka caawisaa baruurta dufanka ka baxda si ay u bixiso aamusiye iyo jir culus. Marka muruqyadaadu dhammaantood dhistaan, waxaad u baahan doontaa inaad gooyo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad qabtid badan oo dufan oo ka hooseysa maqaarka. Nasiib wanaag, Superdrol ayaa kaa caawineysa in ay hoos u dhacdo dufanka inta uu ku sii socdo muruqa.
7. Superdrol loogu talagalay duufaanta
Kuwa doonaya inay indhaha ka fiirsadaan, Superdrol waa doorasho aad u fiican. Iyada oo loo marayo dhiirigelinta xajinta nitrogen iyo synthesis protein, waxay bixisaa natiijooyin fiican. Si wadajir ah iyo cunto caafimaad leh oo wanaagsan, waxay kaa caawineysaa inaad ku darto muruqyadaada.
8. Gunnooyinka Superdrol
Inaad noqoto jir-dhiseyaal waxay ku baaqeysaa in ka badan tufaax adag iyo jimicsi. Nasiib darro, tani ma xaqiijin karto natiijooyinka aad raadin kartid. Isticmaalka Superdrol! Faa'iidada Superdrol waa mid la taaban karo oo muuqaal ah mana laga yaabin in lagu magacaabo walaalaha walaalkiis ah ee weyn.
Waa kuwan qaar ka mid ah Gunnooyinka Superdrol;
Burburka fatahaadu waa daaqada cusub ee adduunka ee jirka jirka. Waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo suuqa ka jira oo sheeganaya inay caawimaad ka helayaan tan iyo qaar kale ayaa weli ku soo baxaya. Dhibaatadu waxay tahay in dhammaantoodu aysan aheyn mid wax ku ool ah mana laga yaabo inay kaa caawiyaan inaad gaarto bartilmaameedkaaga. Qaarkood waxay kaa dhigi karaan miisaankaaga si aad u dhaqso badan oo aad kuhesho maqaarka haragga ama muruq la'aan.
Himilada ugu dambeysa waa inaad luminaysaa baruurta iyadoo la yareeyo dufanka jidhka oo aan ka lumin muruqyadaada. Markaad lumiso muruqyadaada, waxaad noqotaa mid aan qarsoodi lahayn, oo dhammaan lugahaaga way baaba'ayaan.
Haddii aad ka fekereysey inaad daadisid miisaanka dheeraadka ah, markaas Superdrol waa inuu marka hore maskaxdaada yimaadaa. Haddii aad isku dayday diirinta, tababarka ama labadaba, waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inaad u baahan tahay wax dheeraad ah. Nasiib wanaag, Superdrol waxay kaa caawineysaa inaad yareyso miisaanka si waxtar leh. Waa mid ka mid ah alaabooyinka lagu kalsoonaan karo. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Cycle, Natiijooyinka, Faa'iidooyinka, Qiyaasta
Faa'iidada leh waa in ay bixiso natiijooyin macquul ah adigoo kaa caawinaya inaad hoos u dhigto miisaankaaga heerkaaga heerka ugu fiican. Maadaama ay leedahay awooda lagu ilaalinayo murqahaaga, waxaad mar walba yeelan doontaa muuqaal muuqaal ah tan iyo markii Superdrol ay ku caawineyso gubida baruurta saafiga ah iyo wax kale.
Looma haynin biyaha
Dhammaan jirka-jirka, da'da yar ama da'da ah, ayaa lagu xukumaa muruqyada muruqa, qeexidda, iyo cabbirka. Marka qofku leeyahay qeexitaanka muruqa ka sareeya, heerarkooda dufanku aad ayay u hooseeyaan. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood qeexidda murqaha ayaa laga yaabaa in la yareeyo sababtoo ah biyaha lagu hayo.
Qaar ka mid ah steroids ayaa kaa caawin doona inaad kasbato muruqyo waawayn taas oo ka dhalata hannaanka dareeraha. Si daacadnimo ah, ma rabi laheyd inaad eegto dhammaan kuwa wax boodaya sababta oo ah hargab aad u badan. Waxaad diiradda saartay cuntadaada, tababarka iyo qaadashada steroidkaaga ka dibna dheecaanka badani wuxuu ku kordhiyaa muruqyada adag. Dareerida xad-dhaafka ah waa inaanay noqon sababta sababta muruqyadaadu u muuqdaan kuwo cakiran.
Hantida noocan oo kale ah ayaa la baabi'in doonaa isla markiiba mar haddii lagugu sameeyo qiyaastaada. Waa wax ku meel gaar ah waxaana laga yaabaa inuu kaa tago adiga oo ah sidii aad horey u isticmaaleysey steroid.
Mid ka mid ah muhiimada gaarka ah ee Superdrol waa in aysan keenin sii-haynta biyaha. Taasi waa sababta ay muruqyada u muuqdaan kuwo adag, musqulna waa mid cajiib ah. Isticmaalida steroid waxay u qalantaa iibsi maadaama ay awood u leedahay inay ku siiso qeexitaan qumman oo kaa kasbada booska koowaad haddii ay dhacdo inaad ka qeybgasho tartan kasta.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad maqashay siyaabaha aad u dhisi kartid muruqyadaada. Haddii aad raadineysid hab laguugu guulaysto muruqyada weyn, waxaad weli ku sii jiri doontaa waxyaabo badan, waana markaad ogaato in ay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan. Qaar ka mid ah ayaa kaa tagi doona, oo wareersan, jahwareer leh. Waa hagaag, waxaan kuugu fiicnahay warka:
The Saamaynta sumcadda dheeraadka ah ee Superdrol waa mid aad waxtar u leh markaad go'aansato iibso budada Superdrol, waxaad u maleyn doontaa inaadan dib u eegin. Waxaan si kalsooni leh u odhan lahaa haddii aad isku celcelisid ama aanad lahayn murqo, steroidskaan ayaa kaa caawin doonta inaad dhisato jirdhis muruqa ah oo caan ah oo aad udoonayso.
Sida lagu xusay saameyntii hore ee Superdrol saamayntu waxay ka dhalatay dheellitir dheellitir oo dheellitiran iyo xajinta nitrogen. Labaduba waxay ku sii kordhayaan wareega, taasina waa sababta Dhismaha jirka ee Superdrol Higsashadu waxay ku kasbanyihiin jagada labadaba goobta jimicsiga iyo goobtaada shaqada. Iyadoo maskaxda lagu hayo, ma sii wadi doontid sababta muruqyadaada ay u soo jiidanayaan maalinta soo jiidashada badan.
Wax saameyn ah kuma leh estrogenic
Mid ka mid ah dhibaatooyinka daran ee ay keento steroids ayaa ah saameynta estrogenic. Marka laga hadlayo nafaqada, tani macnaheedu waa in wax laga bedelo horumarinta galmada iyo taranka mid ka mid ah. Qofna ma rabo in uu ku dhaco ginecomastia ama nin boobs ah marka isku dayayo inuu helo muruqyo waaweyn. Waxay kaa dhigi kartaa inaad ka xishoodo iyo kaydka qosolka ah. Steroidkani waa mid u qalantaa sababtoo ah saameynaha 'Superdrol' kuma jiraan waxyeelada estrogenic.
Maadaama aad tahay steroid anabolic, uma baahnid inaad qaadato wax daawo ah oo ka hortag ah ood kolba markaad go'aansato inaad bilowdo wareegga Superdrol. Si ka duwan noocyada kale ee steroids oo laga yaabo inay kaa tagaan saameynta cabsida estrogenic, Superdrol waxay ka tagi doontaa heerarkaaga iyo quudkaaga aad u hooseeya.
Kordhinta tamar iyo difaac
Ma jiro steroid kale oo ku siin kara faa'iidooyin badan sida kuwa Methasteron. Waxay u xirtaa bandhigga marka la eego kor u qaadidda wax soo saarka unugyada dhiigga cas. Sidaa awgeed, waxaad ka heleysaa heerar tamar ka fiican iyo sidoo kale difaac fiican.
Ku socoshada dib u eegista Superdrol, dad badan ayaa sheeganaya in ay dareemayaan tamar ka dib isticmaalka Superdrol. Soo kabashada iyo dulqaadashada ayaa sidoo kale lagu dhiirigeliyaa taas oo u ogolaanaysa inaad si tabar daran u tababbarto. Qaadashada qiyaasta saxda ah ee Superdrol waxay kaa caawineysaa inaad daryeeshid daal, aadna marwalba aad u tababaran kartid waqti kasta oo aad dareemaysid. Ma habboon tahay?
Ku dar xoog
Mar kasta oo aan maqlo jirdhislayda waxay ku hadlaan xajmiga oo aan helin, sidoo kale waan xajinayaa. Xoojinta ayaa ah waxa ugu muhimsan ee jir-dhisidda. Haddii aanad ku guuleysan, ma awoodid inaad kor u qaado miisaanka aad u maleyneyso. Waxaad aragtaa waxa aan ula jeedo in ay tahay haddii aad rabto inaad ka sii weynaato markaad rabto inaad marka hore sii xoogaysatid mana jirto meel kale oo ku xeeran.
Dad badan ayaa jecel inay yeeshaan muruqyo indhaha oo wanaagsan oo ay iloobaan in xooggaagu yahay waxa kaa caawinaya inaad sameysid. Haddii aad rabto inaad eegto xoog oo aad u dhaqanto sida, Superdrol waa steroid adiga kuu gaar ah. Waxay ka caawinaysaa muruqyadaada inay koraan oo ay sii weynaadaan waqti isku mid ah.
Xallinta saboolnimada dib-u-dhaca
Badanaa, dadka qaarkood ma heli doonaan baaluq waqtiga saxda ah. Tusaale ahaan, qaar ayaa laga yaabaa in ay ku jiraan labaatan sano inta ay da'doodu saxdaa tahay qiyaas ahaan toban iyo toban. Waxyaabo badan ayaa sababi kara arrintan oo ay ku jiraan arrimaha deegaanka oo ay ka mid yihiin kuwa kale.
Sababtoo ah steroids waxay u muuqdaan inay qabtaan howlaha testosterone, qaadashada Superdrol waxay ku caawin kartaa xalinta qaangaarka. Natiijo ahaan, nin ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid qaan gaar ah, oo dhaqdhaqaaqa jirka iyo jinsiga ah ayaa laga yaabaa inay si fiican u hagaajiyaan.
Inaad noqoto cudur dhiig oo calaamadeeynaya tiro hooseeya ee dhiigga unugyada dhiigga, Anemia waxaa lagu daweyn karaa isticmaalka Superdrol. Sababtoo ah Superdrol waxay kordhisaa heerka unugyada dhiigga cas ee jidhka. Lama yaabe daawada Anemia ayaa la sheegay inay leedahay steroids qaar ka mid ah. Ogow in daaweynta Anemia, Superdrol waa in si joogto ah loo qaataa.
Testosterone Therapy Bedelida
Marka heerka testosterone uu ku yaraado jirka, Superdrol waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo isudheelitirka. Testosterone vs. ismaamulada estrogen waxay keeni kartaa dhibaatooyin jidhkaaga ka mid ah oo ay ku jiraan kordhinta dufanka jidhka dadka kale. Iyada oo loo marayo maamulka Methasteron, saameynteeda ayaa laga yaabaa in la baddalo tan iyo markii steroidkani u jiheysto sida Testosterone u shaqeyso.
9. Dib u eegista Superdrol
Ai wuxuu leeyahay, "Maydhiddani waxay u muuqataa sida ugu fiican ee aan u helo ilaa hadda. Waxaan isticmaalay dhowr steroids muddo tobanaan sano ah, oo hadda, tani waa waxa aan u shaqeeyay aniga. Ka dib markii dadka kale ay ku fashilmeen inay natiijooyin fiican i siiyaan, waxaan u maleynayey in naftayda ay jirto wax ka sii wanaagsan. Run ahaantii, Superdrol waa mid aad u fiican haddii aad rabto inaad ku darto tiro badan oo muruq ah. Waxaan u maleynayaa inaan u mahad celinayo buyaas.com si aan u iibiyo.
Waxaan qaadanayay lixdii toddobaad ee ugu dambeysay iyada oo aan isbeddel badan ku sameynayn jimicsigeyga. Muruqyadayda hadda waa kuwo aad u weyn oo la qeexay; wax aan u maleynayey inaysan marnaba igu dhici doonin. Waxay soo saartay maqaaradayda inaan aad ugu faraxsanahay inaan tababar la qaato xabadka oo dhan. Haddii aad qaadato stero-gale kale oo aan ahayn Superdrol, markaa waxaad samaynaysaa dhammaan khalad. "
Bai wuxuu yiri, "Superdrol waa hooyada soo kabashada. Waagii hore, waxaan dareemay daal badan laakiinse aanan ahayn. Waxaan u adeegsanayey seddexda usbuuc, waxaanan dareemayaa tamar badan maalinta oo dhan goobta shaqadayda (waxaan ka shaqeeyaa goobta dhismaha). Taas waxaa ka duwan, waxaan la cayaaraa wiilasheyda fiidkii kahor inta aanan ku dhufanayo shaqadeyda.Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska
Waxaan akhriyay qiyaaso kala duwan oo ah steroids ilaa aan ka degey Superdrol miyuusiyaanka iyo dhammaantiis waxaan dhihi karaa waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyntii helnay alaabta ugu fiican. Oh! Adeegga macaamiisha ayaa ka sarreeya kana weyn. Isgaadhsiintoodu waa kiniisadda ugu sareysa, aniguna waxbaan ku heley wakhti aan ku jiro. Ma dhihi karo ku filan meeshan iyo badeecadan. Waa haa tahay aniga. "
Bohai ayaa yiri, "Waxaan ka shaqeynayay in ka badan toban sano waxaanan isku deyey wax kasta oo maskaxdaada ku jira. Ka dib markii uu socdo wareegga boodhka, marwalba waan ku mashquulsanaa goynta iyo badanaa, waxaa la iga tagay qiyaas weyn oo aanan lahayn muruqyo muuqda. Wax yar ayaan go'aansaday markii aan soo iibsaday tan laakiin rajo weyn ayaan ka qabay Dib u eegista Superdrol Waxaan akhriyay online.
Xooggayga iyo adkaysigaygu wuxuu jirey tan iyo markii aan bilaabay isticmaalka steroidskan. Laba todobaadkii aan isticmaalay, waxaan dareemay in aan si aad ah u tiirsanahay iyo dheecaan badan. Inkastoo aan sii waday miisaankii aan maalin laha lahaa, dufankaygii jirka ayaa hoos u dhacay 3.4%. Waxaan u egyahay oo dareemayaa sida cusub iyo inaan nafteyda eego muraayadda; Waxaan ka tagay yaabay sababta aan hore u bilaabin. Waxaan u dammaaneyn lahaa qof kasta oo doonaya inuu gooyo oo uu ilaaliyo muruqooda. "
Ying wuxuu yiri, "Waxaan ka iibsaday Superdrol ka soo jeedinta asxaabta muuqaalkayga ah. Waxaan marwalba rabay in aan kudhaqaaqo, laakiin kuma kalsoonaan jirin jirkayga. Markaan fadhiyo miiskeyga shantii sano ee la soo dhaafay waxay ku dartay dufanka jirkeed oo mar hore cabbiray nooca.
Ugu weynaantey dhammaadkii sannadkii hore, waxaan ahaa 223. Afar maalmood kaddib markaad wax cunayso nadiifinta iyo socodka Superdrol, waxaan hoos u dhigi doonaa 199lbs. Steroidkani wuxuu ku dhuftamayaa calaamad kasta oo ay ka mid tahay in uu keeno saameyn xun. Ma aanan dareemin wax saameyn ah oo ah Superdrol illaa iyo hadda, taasina waxa iga dhigeysa inaan jeclahay badeecadan xitaa in ka badan. Jidhkaygu wuu soo laabanayaa, waxaanan iska casilay oo waxaan bilaabay inaan sameeyo wax aan mar walba jecel yahay kaas oo ah qaab xirfadeed. Kaalmada dheeraadka ah ee Superdrol ayaa iga caawisay inaan dhameeyo jiritaanka jidhka oo kaliya. Waad ku mahadsan tahay Superdrol! "
10. Superdrol iibka
Waxaa jiraya waqti markii qof kasta oo jirka ah dareemo sida ay u baahan yihiin wax dheeraad ah. Isticmaalida steroids waa hab hubaal ah oo loo xoojiyo koritaanka murqaha waxayna lumiso miisaanka dheeraadka ah haddii taasi tahay hadafkaaga. Dhaqdhaqaaqa xirfadlayaasha ah ma aha dadka kaliya ee isticmaala steroids, laakiin wax kasta oo jimicsi caadi ah oo dareensan sida ay u baahan yihiin inay u bixiyaan jidhkooda ayaa u tegi kara.
Superdrol waa mid ka mid ah steroids caan ah oo ku siin doona boog ah bangigaaga. Waa daroogo la ilaaliyo, mana laga yaabo inaadan awoodin iibso budada Superdrol meel kasta. Xaaladaha badankood, waxaa laga yaabaa inaad duped, waxaadna ku dhameysan kartaa badeecad gebi ahaanba ka duwan. Keenista gacmahaaga soosaariyaha Superdrol waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan, haddii aadan ka taxaddarin, waxaa laga yaabaa inay noqoto lacag qashin ah.
Internetka ayaa ah meesha ugu fiican ee aad ka iibsan karto Superdrol online adiga oo aan marin hababka adeegga oo dhan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad hesho internetka oo aad ku aqoonsato bixiye sare ee Superdrol oo ku siin doona alaab tayo leh. Waxay kaa horjoogsan doontaa inaad soo iibsato alaab aan shaqayn ama mid waxyeello u geysanaya caafimaadkaaga.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu sarreeya si aad u hesho alaab-qeybiye wanaagsan waa inaad heshaa mid ka mid ah dib-u-eegida aad u fiican. Doorashada mid ka mid ah dib-u-eegista saxda ah ayaa kaa caawin doona xalinta dhibaatada adoo raadinaya bixiyaha Superior Superdrol. Waxay micnaheedu tahay in hadda aad maskaxdaada ka dhigi karto iyadoo ay ku xiran tahay waxa dadka kale la kulmay bixiyaha Superdrol.
Intaa waxaa dheer, waxaa laguu ogolyahay inaad isbarbardhigto qiimaha u dhaxeeya alaab-qeybiyeyaasha kala duwan raaxada gurigaaga. Yaa jecel inaan badbaadiyo dhowr dollar oo dheeraad ah? Si kastaba ha ahaatee, waa in aad fiirisid qiimaha aad u hooseeya oo u shaqeeya sida hufnaan macaamiisha aan shaki gelin. U tag mid ka mid ah kuwa bixiya heer caadi ah oo qiimo u leh sheyga, oo aan ka tagin aad jabisay.
Waxaan nahay shirkadda Superdrol ee ugu fiican oo ay alaabtoodu ku siiso waxtarka ugu sareeya. Dhammaan qaybaha ku yaala Superdrol ee iibka waa kuwo ammaan ah iyo sida ku qoran sharaxaadda badeecada. Marka aad bilowdo inaad qaadato, marna ma dhibi doontid si aad u gaarto hadafyada jidhkaaga.
Qiimaha Superdrol waa mid macquul ah, waxaana loo helaa qof kasta oo ay ku jiraan kuwa ku jira miisaaniyadda - qorshaynta iibso Superdrol si aad u badan? Waxaan helnay heshiisyada ugu fiican adiga. Bixinteenu waa mid lagu kalsoonaan karo, waxaadna filan kartaa xirmadaada waqtiga ugu gaaban. Ku dukaam maanta oo hesho tayada dhabta ah ee Superdrol.
Sida lagu arkay maqaalkan, isticmaalka Superdrol wuxuu kaa caawin karaa inaad ku kasbato magaca jirka ugu fiican. Qof kasta oo ku jiray jimicsiga Superdrol wuxuu si sahlan u sheegi karaa cadaadiska la socda. Qaar badan ayaa ah waqtiyada aad dareemeyso inaad iska bixiso, sababtoo ah waxaad u maleyneysaa in aadan gaarin heerka ugu sarreysa adigoon isticmaalin daroogada kordhinta. Nasiib wanaag, Superdrol waxay xoojin karaan nidaamka ku siinaya natiijooyin xiiso leh.
Iyada oo adeegsaneysa safarkaaga jidh-dhisida ma sii joogi doono; lixda toddobaad ee soo socota, waxaad heli doontaa natiijooyin la ogaan karo. Marka la isku daro cunto wanaagsan iyo tababbar adag, waxay ku siin doontaa muuqaal muuqaal ah.
Xitaa in ka badan, waxay xaqiijisay inay faa'iido u leedahay daaweynta xaalado caafimaad oo caadi ah maanta. Si kastaba ha noqotee, inaad iska ilaaliso dhaawaca jirkaada in ka badan oo aad ka caawin karto, waa inaad qaadataa qiyaasta Superdrol sax ah. Qaar badan oo ka mid ah waxaa laga yaabaa inaanay had iyo jeer kuu sheegin natiijooyin wanaagsan.
Markaad isticmaasho Superdrol, waa muhiim in aad hubiso cuntadaada si aad u hubiso in aad ka heshay inta ugu badan. Cunitaanka cuntooyin badan oo ka mid ah cuntooyinka borotiinka-sare leh waxay gacan ka geysan karaan in ay kor u qaadaan waxyeellada Superdrol. Sidoo kale, hoos u dhigista tirada carafka iyo cuntooyinka dufanka leh ee aan caafimaad qabin ee aad qaadato ayaa sii wadi doonta Goynta Superdrol natiijooyinka.
Ka shaqeyn dheeraad ah waa waxa ka dhigi doona Superdrol natiijooyin badan oo la arki karo. Waa murugo in qaar ka mid ah jir-dhiseyaashu ay u maleynayaan in qaadashada Superdrol iyo tababarku aanu helin shaqada. Inkastoo steroidskaan ay ka caawineyso kobcinta muruqyada, taasi macnaheedu maahan in aad kudagsatid qolka jimicsiga. Xaqiiqadu waxay tahay in aad xitaa laba jeer ka shaqeyso maxaa yeelay adigu waad xoogan tahay oo hadda waad ka bogsan kartaa.
Maanta soo iibso oo raadso guulaha aad mar walba ku riyootay.
Taageerada Isboortiga: Waxyaabaha Caafimaad iyo Fiyriga, By Will Brink, Page 302-307
Cunnooyinka nafaqada ee cayaaraha iyo jimicsiga, oo ay sameeyeen Mike Greenwood, Matthew B. Cooke, Tim Ziegenfuss, Douglas S. Klman, Jose Antonio, bogga 13
Anabolic-Androgenic Stteroids, oo uu sameeyay Charles D. Kochakian, bogga 374